नागार्जुन नगरपालिकामा चरम बेथिति, ८ वटा रुख काट्न ५४ जना, लागत ७ लाख ! - Jagaran Post
अन्तर्राष्ट्रिय समाजबाट किन एक्लिँदैछ अमेरिका?
आज महानवमी, दुर्गाभवानी सिद्धिदात्रीको पुजाअर्चना गरि मनाईंदै
नागार्जुन नगरपालिकामा चरम बेथिति, ८ वटा रुख काट्न ५४ जना, लागत ७ लाख !
जागरणपोस्ट २४ आश्विन २०७७, शनिबार १०:१९ पत्रपत्रिकाबाट
काठमाण्डौ– सीतापाइला–रामकोट–भीमढुंगा सडकमा आठवटा पीपलका रूख थिए।
नागार्जुन नगरपालिकाले ती रूख काट्न ६ लाख ५२ हजार रुपैयाँ खर्च ग¥यो, जसअनुसार एउटा रूख काट्न ८१ हजार पाँच सय रुपैयाँ लाग्यो।
रूख कटान शीर्षकमा सनराइज कन्स्ट्रक्सन एन्ड सप्लायर्सले चार लाख ५२ हजार र अर्को सेवाप्रदायकले दुई लाख रुपैयाँ भुक्तानी लिएका छन्। यो खबर आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा प्रकाश धौलाकोटीले लेखेका छन्।
कटान भएका रूखको बिक्री आय र मौज्दात विवरणसमेत खुलाइएको छैन । महालेखाले लागत अनुमान, मूल्यांकन र प्रतिस्पर्धाविनै नगरपालिकाले रूख कटानमा अस्वाभाविक खर्च गरेको भन्दै प्रश्न उठाएको छ।
सडक विभागमार्फत निर्माणाधीन सडकमा अहिले पनि काम जारी छ । त्यसमध्ये सीतापाइला–हरिसिद्धि खण्ड कालोपत्रे भइसकेको छ । हरिसिद्धि–भीमढुंगा खण्डमा कालोपत्रे बाँकी छ।
नागार्जुन नगरपालिकाले नै आफ्नै स्रोत, साधन, जनशक्ति र उपभोक्ताबाट गर्न सकिने कामसमेत गैरसरकारी संस्थामार्फत गराएको छ।
महालेखाका अनुसार नगरपालिकाले गैरसरकारी संस्थालाई जनचेतनामूलक तालिम, अभिमुखीकरणजस्ता दुई सय १४ वटा कार्य सञ्चालन गर्न चार करोड ६० लाख २८ हजार रुपैयाँ दिएको छ।
महालेखा प्रतिवेदनअनुसार नगरपालिकाले ३० पुस ०७५ मा गरेको एक कार्यक्रममा ५४ जना मात्रै सहभागी थिए । तर, कार्यक्रममा उपस्थित संख्या एक हजार देखाएर जनही दुई सय २६ रुपैयाँका दरले खर्च लेखिएको छ।
त्यसरी नै विभिन्न कार्यक्रममा सहभागी संख्या बढाएर चार लाख २८ हजार रुपैयाँ खर्च भएकाले महालेखाले प्रश्न उठाएको छ।
यस्तै, कीर्तिपुर नगरपालिकाले आव ०७५÷७६ मा विनियोजित ९४ करोड रुपैयाँमध्ये करिब ६२ करोड मात्रै खर्च ग¥यो । खर्च भएकोमध्ये पेस्की मात्रै ६ करोड ३४ लाख १८ हजार रुपैयाँ छ । महालेखा प्रतिवेदनअनुसार नगरपालिकाले अघिल्लो आव ०७४÷७५ कै ३१ करोड ८२ लाख ४७ हजार रुपैयाँ पेस्की फस्र्योट भएको छैन।
सरकारी खर्चमा हुने सेमिनार, गोष्ठी, तालिम आयोजना गर्दा सरकारी कार्यालयमै गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाले महँगा होटेलमा कार्यक्रम राखेर बिल भर्पाईमा प्रयोजनसमेत नखुलाई २१ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ।
जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएको दुई वर्ष पूरा भएको अवसरमा सल्लाह सुझाब संकलनका लागि भएको एउटै कार्यक्रममा नगरपालिकाले सात लाख २२ हजार रुपैयाँ खर्चेको छ।
निर्मला हत्या प्रकरण : पुराना फाइल पल्टाउँदै प्रहरी
चुनौतीका चाङका बिचमा अर्थमन्त्री
दिउँसै मापसे चेकिङ, एपबाटै चालकको निगरानी
एक छाक भात खान ६ महिनादेखि खुलामञ्च
जनकपुर–जयनगर रुटमा भारतबाट ल्याइएको रेल सञ्चालन अन्योलमा
देशभर लकडाउन हुन्न, निषेधाज्ञा हुनसक्छ : स्वास्थ्य मन्त्रालय
सरकार र डा. गोविन्द केसीबिचको बार्ता सकारात्मक, आजै
डा. केसीको स्वास्थ्य थप जटिल बन्दै
विराटनगरमा २ जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु
रुपन्देही र पाल्पामा गरी आज थप २ कोरोना संक्रमितको मृत्यु
हिजो बुटवलबाट हराएका बालक आज मृत भेटिए
काठमाडौं उपत्यकामा थप ११ सय १० जनामा संक्रमण
राजस्वको लक्ष्य पूरा गरौँला या धेरै नजिक पुगौँला भन्ने पूर्वानुमानमा छौँ : अर्थमन्त्री पौडेल
कोरोना नेपाल : २४ घण्टामा दुई हजार दुई सय २५ जनामा कोरोना पुष्टि
जागरणपोस्ट १९ आश्विन २०७७, सोमबार ०७:१२
जागरणपोस्ट ४ आश्विन २०७७, आईतवार १०:२१
जागरणपोस्ट ३० भाद्र २०७७, मंगलवार ०९:४५
जागरणपोस्ट ३ भाद्र २०७७, बुधबार ०६:०२